Ngo-Okthoba 2017, Udinga Ukuba Nesitifiketi Se-SSL Esingabonakali | Martech Zone
NgoLwesibili, Agasti 8, 2017 Douglas Karr
Ukugcina ukuphepha kuhlale kuyinselele ku-inthanethi. Ukusingathwa kweNimbus kusanda kwakha isithombe esisebenzisekayo, okukhombisa ukubaluleka kwalokhu okusha isitifiketi se-SSL esobala isinyathelo semikhiqizo ye-eCommerce, kanye nokunikeza uhlu lokuhlola olunzulu ukusiza ngokuhambisa iwebhusayithi yakho kalula ku-HTTPS. I-infographic, I-SSL esobala nokuthi Ungayihambisa Kanjani Iwebhusayithi Yakho ku-HTTPS ngo-2017 ifaka izibonelo zokuthi kungani le ndlela entsha ye-SSL idingeka.
Ezinye izindaba ze-SSL ezethusayo zifaka phakathi
Izinhloli zaseFrance - I-Google ithole ukuthi i-ejensi kaHulumeni waseFrance isebenzisa izitifiketi ezinamandla ze-Google SSL ukuthola inamba yabasebenzisi.
IGithub vs China - Umsebenzisi oyedwa obephethe isizinda sesizinda sokusingathwa kwentuthuko uGithub wanikezwa ngokungafanele isitifiketi se-SSL esiyimpinda yesizinda sonke yisiphathimandla sesitifiketi saseChina.
Izisulu Zase-Iranian - Izitifiketi zedijithali ezi-inkohliso ezikhishwe yi-DigiNotar zisetshenziselwe ukugenca ama-akhawunti e-Gmail wabasebenzisi abalinganiselwa ku-300,000 2011 base-Iranian ngo-XNUMX.
Ngalezi zizathu nezinye, uma iwebhusayithi yakho ingenaso isitifiketi se-Transparent SSL ngo-Okthoba 2017, i-Chrome izomaka iwebhusayithi yakho njenge- Akuphephile, ukudikibalisa abasebenzisi ukuthi bangayivakasheli, futhi ukuphepha kwewebhusayithi yakho kungaba sengozini. Manje yisikhathi esikahle sokugibela.
Qalisa i-Google Transparency Test kusitifiketi sakho se-SSL
Iphrojekthi Yesitifiketi Sokubonisa Ngale Kwe-Google
Eminyakeni yakamuva, ngenxa yamaphutha esakhiwo ohlelweni lwesitifiketi se-HTTPS, izitifiketi nokukhishwa kwama-CA kukhombise ukuba sengozini yokuyekethisa nokukhohlisa. Iphrojekthi ye-Google yokubonisa ngale ihlose ukuvikela inqubo yokukhishwa kwezitifiketi ngokunikela ngohlaka oluvulekile lokuqapha nokucwaninga izitifiketi ze-HTTPS. I-Google igqugquzela wonke ama-CA ukuthi abhale izitifiketi abazikhiphayo ukuze ziqinisekiswe esidlangalaleni, izingodo ezifaka ubufakazi obuphazamisayo. Ngokuzayo, i-Chrome nezinye iziphequluli zinganquma ukungazamukeli izitifiketi ezingabhalelwanga izingodo ezinjalo.